Malunga nathi - Jiangyin Xinlian Welding Equipment Co., Ltd.
1 MIG Welding itotshi
Uhlobo lwePSF (ESAB)
Icandelo leMIG Welding
Uhlobo lweF Miller
H Uhlobo lweTregaskiss
Uhlobo lukaJ Fronius
Uhlobo lweK Kemppi
L PSF (ESAB) Uhlobo
Imilomo yegesi kunye nee insulators
Uhlobo lwe-MA MAXI
P Uhlobo lweSumig kunye neOximig
Q MIG Isinxibelelanisi
R wocingo feeder mqengqeleki
Uhlobo lweKemppi lokuhambisa uMxhasi
Olunye udidi lokuhambisa uMxhasi
I-2 TIG Welding
I-TIG Yitotshi ye-Euro
TIG ITotshi eMelika
OoKepusi abaBuyayo kunye nee-Insulators
Yodongwe / Alumina umlomo
Ii-Cable Adapt-USA Series
I-WP17 / 18/26 yeNdebe yePyrex yoFutshane yoCwangciso
I-WP17 / 18/26 yeeNdawo zePyrex yeNdebe yoLungiselelo oluSisiseko
I-WP17 / 18/26 yeNdebe yePyrex yoCwangciso loCwangciso oluKhulu
I-WP17 / 18/26 yeNdebe yePyrex yeStubby yoCwangciso loCwangciso
I-WP9 / 20 yeNdebe yePyrex yoQeqsho lweeNdawo ezinkulu
I-WP9 / 20 yeNdebe yePyrex yoFutshane yoCwangciso lweNkqubo
Ukuphindaphindwa kwetotshi yePlasma
Amaza ePlasma eTotshi aQhelekileyo
Isinxibelelanisi se-Euro Cable 10-25mm2
Isinxibelelanisi seNtambo ye-Euro 35-50mm2
Isinxibelelanisi seNtambo ye-Euro 50-70mm2
Isinxibelelanisi seNtambo ye-Euro 70-95mm2
Uhlobo lweThai lweCustom Cable Connector 10-25mm2
Isinxibelelanisi seNtambo yaseThai 35-50mm2
Olunye uhlobo lweCocket Socket
Amanzi kunye neGesi iziXhobo eziKhawulezayo
Jiangyin Xinlian Welding Equipment Co., Ltd. yasekwa ngo-2006 kwaye ibekwe e Wuxi, Jiangsu, kunye indawo ophezulu geographical kunye nokuthuthwa lula. Inkampani igubungela indawo ye-7,000 yeemitha zesikwere kwaye ngoku iqeshe abantu abangaphezulu kwe-100. Lishishini eliphakamileyo lobuchwephesha elidibanisa imveliso, uphando kunye nophuhliso, ukuthengisa kunye nenkonzo.
Inkampani inamandla obuchwephesha, izixhobo eziphambili, izixhobo zovavanyo olupheleleyo, kwaye iqokelele iminyaka emininzi yamava emveliso. Ngokusebenzisa izinto ezintsha ezizimeleyo, inkampani iyaqhubeka iphucula inkqubo yokuvelisa kwaye inyusa izinga lokuhlola ukumiliselwa ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nozinzo lomgangatho wemveliso. Ukutyhubela iminyaka, inkampani iye yazisa ngokulandelelana izixhobo esizisebenzelayo se-high-tech, iphucula kakhulu ukusebenza kwemveliso kunye namandla, kwaye iqhubeka yomeleza amandla eenkampani.
Ukusukela oko yasekwa le nkampani, siye sachongelwa ukuvelisa uthotho lweetotshi ze-MIG / MAG, iitotshi ze-TIG, iitotshi zokusika iplasma yomoya kunye nezinye izinto ezinxulumene noko. Iimveliso zethu zidlulisile ukuqinisekiswa kwe-CE, isatifikethi seRoHS, iintlobo ezipheleleyo kunye neenkcukacha, umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana. Ngomgangatho obalaseleyo kunye nenkonzo egqibeleleyo, inkampani iphumelele ukubonwa ngokubanzi kunye nendumiso ngamxhelo mnye evela kubathengi. Iimveliso zayo zithengiswa kakuhle kumazwe angaphezu kwama-50 nakwimimandla, kwaye iseke ubuhlakani bexesha elide kunye neenkampani ezininzi ezaziwayo.
Inkampani ihlala iphumeza imo "yomgangatho wokuqala, umthengi kuqala", ulawula ngokungqongqo umgangatho, ubambelela kwicala lophuhliso lobuchule "lokuphila ngomgangatho, kwaye uqhubeka ngokwenziwa kwezinto ezintsha", usete iseyile kwaye uqhubele phambili, kwaye uzise ngakumbi kubathengi Intsimi ebanzi Ixabiso lemveliso kunye namava angcono omsebenzisi.
"Ukufuna ukugqwesa akunasiphelo, ukuhambela phambili kunye namaxesha kunye nokudala ikamva", sijonge phambili ekusebenzeni kunye nawe ukuqhubela phambili kunye kunye nemeko yokuphumelela!
Inombolo 3 Tianyuan Road, Qiaoqi Idolophu, Jiangyin, Jiangsu, PRChina Zip Code 214408